Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweHungary neGolden Visa
Sinikezela Ngosizo Lwezokufuduka Komnotho eHungary ngalokhu:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary
● Ubuzwe ngokutshala imali kusuka eHungary
● I-visa yegolide eHungary
● Iphasiphothi yesibili evela eHungary
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary ngokutshala imali ku-real estate
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eHungary kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eHungary nabathengisi bezinhlelo zokuhlala kabusha eHungary kusebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eHungary kunikezela ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eHungary, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eHungary, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eHungary, Ukuhlala kabusha okwesibili ngokutshala imali eHungary, ukuhlala kabili ngokutshalwa kwezimali eHungary, ubuzwe kanye nokuhlala ngokutshalwa kwezimali eHungary , Ukuhlala unomphela ngokutshala imali eHungary, Ukuhlala okwesikhashana ngokutshala imali eHungary, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eHungary, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eHungary, Ubuzwe ngokutshala imali eHungary, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eHungary, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eHungary, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwemali eHungary, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali eHungary, indawo yokuhlala nobuzwe ngokutshala imali eHungary, ukuhlala kanye nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eHungary, izinhlelo zezomnotho eHungary, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eHungary, Ubuzwe ngezikimu zokutshala imali eHungary, okwesibili ipasipoti eHungary, ipasipoti yesibili Izinhlelo ze-ort eHungary, uhlelo lwesibili lwepasipoti eHungary, iphasiphothi yesibili eHungary, indawo yokuhlala kanye nepasipoti yesibili eHungary, ipasipoti yesibili yezombusazwe eHungary, ipasipoti yesibili ngokutshala imali eHungary, ipasipoti yesibili yobuzwe eHungary, uhlelo lwesibili lwepasipoti eHungary, okwesibili Izinhlelo zepasipoti eHungary, i-visa yegolide eHungary, ama-visa egolide eHungary, izinhlelo ze-visa zegolide eHungary, uhlelo lwe-visa yegolide eHungary, i-visa yesibili yegolide eHungary, uhlelo lwesibili lwe-visa egolide eHungary, i-visa yegolide emibili eHungary, ubuzwe kanye ne-visa yegolide eHungary, ukuhlala kanye ne-visa yegolide eHungary, isakhamuzi se-visa segolide eHungary, uhlelo lwe-visa egolide eHungary, izinhlelo ze-visa zegolide eHungary.
"1 izixazululo zokumisa" kwakho konke ukuhlala kwakho ngokutshala imali eHungary ngokuxhaswa okwengeziwe.
Utshalomali oluncane eHungary lokuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali: EUR 200,000
Isingeniso iHungary kanye nokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali
Funda kabanzi ngeHungary
IHungary yisizwe esingavinjelwe eYurophu egxile kunendawo engama-93,028 km2. Inamaphethelo anezizwe eziyisikhombisa - ngokwewashi ukusuka enyakatho: iSlovakia, i-Ukraine, iRomania, iSerbia, iCroatia, iSlovenia ne-Austria.
IHungary ihlukaniswe nguMfula iDanube, osuka enyakatho uye eningizimu. Kunezindawo ezintathu ezibalulekile zokwakheka komhlaba: IGreat Hungarian Plain noma i-Alfold ngasempumalanga yeDanube, iTransdanubia, indawo enamaqhuqhuva ngasentshonalanga yomgwaqo wamanzi, nemithambeka esenyakatho. Iphuzu eliphakeme kakhulu yiKekes (1,014m) ezintabeni zaseMatra. Iphansi eliphelele liseduze ne-Szeged (77m), eningizimu.
IHungary inomnotho ovulekile, futhi ukuqagela okungajwayelekile kubhekwa njengesidingo. Ukuqagela okungajwayelekile okujwayelekile bekushintshashintsha kusukela sekwedlule isikhathi, kepha-ke, kuye kwanda kakhulu. I-speculator enkulu engajwayelekile eHungary yiJalimane, kanti i-Austria, iNetherlands, ne-USA nazo zibaluleke kakhulu.
Ama-33% embonini yaseHungary atholakala eBudapest. Indawo yokuthengisa yaseBudapest inezitolo ezinkulu eziningi nezitolo ezinamaketanga angajwayelekile. IHungary iyikhaya lezitshalo ezahlukahlukene ezakha izimoto, isibonelo, iSuzuki ne-Audi.
Akukho ukulinganiselwa ekushintshaneni kwemali okungajwayelekile, futhi izinhlangano zingabamba imali engajwayelekile ngaphandle kwemikhawulo.
Amaqiniso ayi-10 aphezulu ngezimo zokuphila eHungary
Ibhalansi yomsebenzi omangalisayo
Ukungabi namsebenzi kuphezulu eHungary, kusetshenziswe amaphesenti angama-68 kuphela abantu abaneminyaka yobudala eyi-15 kuya kwengama-64. Kulabo abasetshenzisiwe, amaphesenti angama-75 ngabesilisa kuthi amaphesenti angama-61 angabesifazane. Noma kunjalo, inani labamele ukusebenza isikhathi eside lingaphansi kwamaphesenti ama-4 – liphansi kakhulu kune-United States, lapho amaphesenti ayi-11 wabasebenzi asebenza khona isikhathi esengeziwe.
Izindlela zokuphila zicishe zancishiswa kakhulu e-EU
Ngokuya nge-GDP, iHungary ibekwe endaweni yama-23 emazweni angama-28 e-EU, ngamaphesenti angama-68 kokujwayelekile kwe-EU. Esikhundleni esiphambili sendawo ese-Austria, esikhiqiza amandla aphindwe kabili eHungary. Esinye isilinganiso esisetshenziselwe ukunquma ngosizo lukahulumeni lwe-shopper, i-Actual Individual Consumption (AIC), lubeka iHungary indawo yokugcina.
Isikhala sokuphila kobuntu siletha izingqinamba ekuhlukaneni kokufaka
Ngo-2015, uhulumeni waseHungary waqeda ukufaka indawo yokuhlala cishe engxenyeni enkulu yabantu abangu-1,000,000 2014 1,000,000 abonakele. Ngaphambi kwalokho, amakhulu ambalwa ezinkulungwane zamaHungary ngaleso sikhathi ayethola indawo yokulala. Umbiko weHabitat for Humanity kusuka ngonyaka ka-44.6 uqaphele ukuthi ingxenye enkulu yabantu baseHungary abayi-52 XNUMX XNUMX babehlala nophahla olungasasebenzi kahle futhi nabahlukanisi ababolile ngokwengeziwe. Ngaphansi nje kwengxenye yabantu (amaphesenti angama-XNUMX) bahlala emaphaketheni agcwele phama, kanti amaphesenti angama-XNUMX abantu baseHungary abangahlali emiphakathini ebalulekile yasemadolobheni basondela esitamkokweni esingcolile.
IHungary inezinsizakalo ezijwayelekile zezokwelapha, kepha izinga nokwanela kokufakwa kuphansi
Ngaphandle kweqiniso lokuthi iHungary ibilokhu ifakwa ukunakekelwa kwezokwelapha okusabalele kusukela ngawo-1940, empeleni ibeka endaweni yesithathu e-EU ngokuya ngokufakwa. Lokhu kungenxa yamanani aphansi okuhola — ochwepheshe bemitholampilo abangalindele ukuthola imali eningi eHungary njengoba bezokwenza kwezinye izingxenye ze-EU. Udaba oluyinhloko ukunakwa kokucatshangelwa kokuphulukiswa emitholampilo, esikhundleni sokucatshangelwa okuvimbelayo kwamanye amahhovisi emitholampilo.
IHungary ithole umsebenzi omkhulu ongajwayelekile
Kusukela ngonyaka we-2018, iHungary ingena minyaka yonke ngama- $ 4.3 billion kumuntu ngamunye webhizinisi elingajwayelekile (FDI), ukululama okugcwele ekumeni kwesimo esiphuthumayo semali sika-2009-10. Yize lokhu ikakhulukazi ngoba iHungary inesimo esihle sokuma komhlaba kulo msebenzi ojwayelekile, ongoti abangajwayeleki bezimali baphinde basusa ukugxila ezintweni ezingenalusizo nokudla okulungiselela amabhizinisi kumabhizinisi anomvuzo omkhulu, ngokwesibonelo, isaphulelo, ukuhweba ngokuthengisa, nokulungiswa kwezimoto.
Amanani wokubhalisa abalulekile futhi angakhethwa aphezulu
Kubafundi besikole samabanga aphansi, ukubhaliswa kuye kwehluka ngandlela thile eminyakeni eminingi edlule, kodwa-ke, kuye kwahlala amaphesenti angaphezu kwama-95 ubukhulu. Ezingeni eliphakeme kakhulu, izinga lokubhalisa lalingamaphesenti angama-97.2 ngo-2009, futhi okungenani ngo-2012, lalingamaphesenti angama-95.7. Kubantu abasha abasesikoleni, izilinganiso zamukeleka ngokuqhathaniswa: kepha kube khona ukukhuphuka okuncane kusukela ngo-2014 kwenani lentsha engafundi, inani elijwayelekile selikhuphuke ngaphansi kwamaphesenti ama-5.
Ukuqeqeshwa kwezemfundo ephakeme kudinga ukusebenzisana
Amaphesenti ayi-13 kuphela wabadala abanesitifiketi seminyaka emine, ngamaphesenti ayi-9 alabo bantu abaneziqu zokufunda noma ezifanayo. Lezi zilinganiso ziphansi, kepha abantu abanalezi ziqu bathola imivuzo. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi iziqu zokufunda esikoleni samabanga aphakeme kungenzeka ziphindwe kabili inzuzo yomuntu eHungary: imfundo yasekolishi yeminyaka emine ifanele ukukhokhwa okukhokhelwayo ngamaphesenti angama-72, kanti uchwepheshe noma ngaphezulu angathola amaphesenti ayi-140 ngaphezu kwezinxephezelo ezijwayelekile zesizwe.
Izintshisekelo zemfundo ephakeme ziyaqhubeka
Umsebenzi oqhutshwe yi-NGO HE HE Innovate wokufaka izinsizakusebenza kwezemfundo esezingeni eliphezulu ubusenzeka eminyakeni eyishumi edlule, okugqugquzelwa ukwehla koxhaso lwezikhungo oluvela kuhulumeni. Isizinda salo msebenzi bekuwukusebenzisa uhlaka olufundisayo lwaseHungary ukuxhasa ukuthuthuka kwezimali nezenhlalo nezenhlalo emazingeni aseduze nasemphakathini. Lokhu kudale ukuthi kunwetshwe ukunwetshwa kwezimali kanye nokwakhiwa kokuqala kwabafundi bezemfundo futhi kudale nentuthuko eqinile yezimali ekhaya.
Izikhungo eziningi zihlanganiswe nguhulumeni kazwelonke
Kusukela esinqumweni sakhe sezepolitiki ngo-2010, uNdunankulu waseHungary uViktor Orban usethole indlela yokuhlanganisa izinto eziningi ezithandekayo emithonjeni yezindaba zikahulumeni ibe yinhlanganisela enenjongo yokwazisa. Le misebenzi itholwe kahle ngabathile kepha hhayi abanye - U-Orban uluthokozela ngokungangabazeki usizo olwengeziwe kubantu abahlala ezindaweni ezithandekayo zaseHungary kunalabo abenza emiphakathini yamadolobha amakhulu aseHungary.
Indawo yaseHungary isiyenze yaba yindawo ebalulekile yokufudukela kubantu abakhishwe ngaphambilini
Kusukela ingxenye yemiphetho yaseHungary ifaka ingaphandle elingaphandle le-European Union, izwe selithole abahambi abaningi ngaphambili. Kunoma ikuphi, muva nje, iHungary ithole isikhundla esinzima kwezokufuduka, esinciphise kakhulu inani labaseshi bokukhosela abavela eMiddle East.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweHungary
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary
Imali eyengeziwe ye- i-visa yegolide ye Hungary
Imvume yokuhlala unomphela kuzwelonke (isebenza iminyaka emi-5)
Icubungula isikhathi sokuhlala ngokutshalwa kweHungary
Ngemuva kweminyaka engu-8 (ubuzwe obubili buvunyelwe)
Ubuzwe obubili buvunyelwe izakhamizi zaseHungary
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kweHungary
Ama-Bond aseHungary Treasury Bonds ase-Euro. Ukuthenga izindlu nomhlaba noma olunye utshalomali akubali. Ngemuva kweminyaka emi-5, lonke utshalomali lungahlengwa, yize umtshalizimali esalokhu egcina ukuhlala kwakhe unomphela.
Kungani kufanele ube yi-Residency ngokutshala imali eHungary
IHungary inohlelo olukhulu lwemfundo, izindleko eziphansi zokuphila. Izwe liyindawo ephephile enezinga eliphansi lobugebengu. Izakhiwo ezithengiswayo eHungary ziphansi kakhulu. Izwe linohlelo lwentela oluzuzisayo. Imvume yokuhlala ngokutshalwa kwezimali ingatholakala ezinyangeni ezimbalwa.
Ukufuduka komndeni eHungary
Ngemuva kokuthola imvume yakho yokuhlala, amalungu omndeni wakho asondele kakhulu angabalingani bakho nezingane ezixhomeke kuwe angathola izimvume zawo ngokuya ngenhloso yokuhlanganisa umndeni.
Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eHungary
Imvume yokuhlala eHungary izonikezwa ngokuya ngokutshalwa kwezimali kwempahla yangempela. Indlela eqondile yokutshala imali ukuthenga amafulethi amabili nokuwaqasha ngenhloso yokwenza inzuzo. Inqubo izoqala kusuka kuwe ukufakwa kwe-LLC eHungary, eqasha amafulethi. Ngemuva kokuthi uthathe isinqumo sokuthi yimaphi amafulethi ofuna ukuwathenga. Ngemuva kwalezi zinyathelo uzothola imvume yakho yokuhlala kusuka ezinyangeni ezi-2 kuye kwezi-3. Imvume yokuhlala kufanele ivuselelwe iminyaka emithathu, ngemuva kwalesi sikhathi uzonikezwa ilungelo lokuhlala unomphela.
Izidingo zezezimali zeHungary
Inani elincane elidingekayo lokutshalwa kwezimali yi-EUR 200,000. Le mali yanele ukukwazi ukuthenga amafulethi amabili, okuzokulethela inzuzo ngenxa yemakethe yezakhiwo ekhulayo. Imali eyengeziwe yohlelo ye-EUR 20,000 iyadingeka. Kuzoba nentela yendawo engu-4% uma uthenga amafulethi.
Ukusekelwa kwamakhasimende ngokuhlala kabusha ngokutshala imali kweHungary
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala Ngabenzeli Bokutshalwa Kwezimali baseHungary futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli kwelaseHungary inikeza amaklayenti nemindeni yawo eHungary ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eHungary, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eHungary namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshala imali okuvela eHungary noma eGolden Visa evela eHungary noma ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eHungary noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshala izindlu nomhlaba avela eHungary, sinikeza isisombululo esiphelele uma ufuna ukusungula inkampani IHungary noma i-offshore, izinsiza zabantu eHungary nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezenzelwe ukuba yisakhamuzi eHungary kanye nokuhlala okwesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi ZaseHungary:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali for Hungary, ngokusebenzisa ezingabizi zethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika kweHungary, abasebenzeli bezokutshalwa kwezimali abafinyelelekayo baseHungary, ukuhlala okungabizi ngabacwaningi bokutshalwa kwezimali eHungary, ukuhlala okungabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali baseHungary kanye nenkampani yokubonisana nabokufika engabizi kakhulu eHungary
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali kusuka eHungary kuya emazweni angama-37.
I-visa yegolide eHungary kuya emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwemali kusuka eHungary kuya emazweni angama-37.
Iphasiphothi yesibili isuka eHungary iya emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa eHungary kuya emazweni angama-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela eHungary.
Izinhlelo ze-Golden visa eHungary kuya emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezisuka eHungary ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zepasipoti zesibili ezivela eHungary ziye emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe zisuka eHungary ziye emazweni angu-106.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweHungary ngeReal Estate
Sihlinzeka ngokusekelwa kokutshalwa kwezindlu kuHungary ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwemali eHungary, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala imali eHungary. Sibophelene nabakhi abambalwa bezindawo ezithengisa izindlu eHungary abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle eHungary, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezihamba phambili zokuhlala kweHungary ngokutshalwa kwezimali kwempahla yangempela eHungary.
Udinga ukwazi - Ukuhlala kabusha kweHungary ngo-Investment
Ukuhlala kabusha nguMmeli Wotshalomali waseHungary kuzohlinzeka ngosizo lwemibhalo eningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali eHungary. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala ngokutshalwa kwemali eHungary zifaka:
Abameli bethu bazoqonda izidingo zakho zokufuduka usuke eHungary noma uye eHungary, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary kumakhasimende ngokuthola imvume yokuhlala eHungary nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala waseHungary, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutshala imali eHungary sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngokufaka isicelo sokutshala imali eHungary. Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali eHungary ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho imibhalo yakho neyomndeni wakho yokuhlala ngokufaka isicelo sokutshala imali eHungary isilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zaseHungary.
Isikhathi: 2 amasonto
Lapho nje isicelo sakho sokuhlala ngokutshala imali eHungary sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izesekeli.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eHungary kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi aseHungary:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eHungary azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezingalo nezinhlamvu ezivela noma eHungary.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali eHungary ahlinzekelwa ukubhekwa kwezobuchwepheshe eHungary noma ubunhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma kusuka noma ukuya eHungary.
Indawo yokuhlala ngokubonisana nokutshalwa kwezimali kweHungary ahlinzekelwa noma yiziphi izenzo ezingekho emthethweni noma zobugebengu eHungary.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali kwelaseHungary akukhona okwabantu abasebenza ngokusebenza kofuzo eHungary.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eHungary akuyona eyamabhizinisi asebenzelana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi eHungary.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kweHungary akutholakali kubantu baseHungary abasebenza ngokuhweba, ukugcina eHungary, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali kwelaseHungary akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo kwelaseHungary akuzona ezenkolo namahlelo abo okusiza abantulayo eHungary.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku Hungary ayihlinzekwa kubantu abasebenzelana nezithombe zobulili ezingcolile eHungary.
Ukuhlala kwethu abameli eHungary awasekeli ukuhweba ngebhizinisi ngezinto zezidakamizwa eHungary.
“Isaziso Esibalulekile : AbakwaMM Solutions INC bathatha izinyathelo ezinengqondo ukuze baqinisekise amaphepha e-AML kumakhasimende aseHungary naseKYC yabo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla eHungary ukuvunywa kwesicelo Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwemali eHungary.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngokuxhaswa kokutshalwa kwezimali eHungary ngokutshalwa kwezimali, ukufuduka kwabantu kanye nokuhlelwa kwezindlu eHungary.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zomthetho zaseHungary, sakha izixazululo ezinhle kakhulu.
Ukuhlala kwethu ngezinsizakalo zokutshala imali eHungary kunikela ngamanani ashibhile, ngenani lempumelelo elingafinyeleleka kahle eHungary.
Sithathe isipiliyoni seminyaka yokuhlala kabili eHungary okusekela amaklayenti nemindeni yawo eHungary.
Ukuhlala Okuhlangenwe nakho ngabaceli bokutshalwa kwezimali baseHungary nabameli bezomthetho baseHungary abanikeza ukusekelwa kumakhasimende
Sinabaceli abahle kakhulu nabasebenzeli benqubo yokuphatha yaseHungary abazinikele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eHungary nangemva kokuvunywa, ilungu lethu leqembu eliphakeme lizoba khona ngebhizinisi noma ukwesekwa kweHungary
Sinesipiliyoni samazwe omhlaba ku-Residency ngokutshala imali kufaka neHungary, sisiza amaklayenti avela emhlabeni wonke ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali eHungary kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuya eHungary
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali kweHungary sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende eHungary, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali lwaseHungary nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa kwelaseHungary
Inqubo Yemvume Yokusebenza yeHungary
Indawo yokuhlala okwesikhashana eHungary
Indawo yokuhlala unomphela eHungary
Ukuba yisakhamuzi saseHungary
AmaNxusa kanye Namanxusa AseHungary
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eHungary nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizihlinzeka eHungary ngezidingo eziseduze noma ezizayo.
Uma uhlela ukuthuthela nomndeni wakho eHungary ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho weHungary, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nokuthi ungadinga nini eHungary ngamanani aphansi.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana nokutshalwa kwezimali eHungary, sinikeza izinsizakalo zebhizinisi, i-IT ne-HR naseHungary, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi baseHungary abasenza isitolo esisodwa seHungary namazwe we-106.
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu, kanye nosomabhizinisi baseHungary ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali eHungary ngosizo lwabameli bethu, ababonisi nababophele eHungary nakwamanye amazwe.
Singakusiza bhalisa inkampani eHungary noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani eHungary zishibhile nathi.)
I-Akhawunti Yasebhange eHungary
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela eHungary uzodinga i-akhawunti yasebhange yomuntu siqu eHungary ne-akhawunti yasebhange yenkampani eHungary, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Isango lokukhokha eHungary
Ingabe udinga ukubonisana eHungary, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali eHungary njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech eHungary noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze IHungary uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elivele likhona eHungary ukuqala ngokushesha eHungary.
Imisebenzi Yezabasebenzi eHungary
Our inkampani yezabasebenzi eHungary ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga post izikhala eHungary free.
Izinombolo zefoni ezingokoqobo zeHungary
Izinhlelo zebhizinisi zeHungary kanye ne izinombolo ezibonakalayo zeHungary Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Imisebenzi Yezokuhlela Kwezimali eHungary
Ukubalwa kwezimali, ukukhuthala okufanele eHungary nase okuningi.
Ikheli Lehhovisi Elibonakalayo eHungary
Ukusetha ibhizinisi eHungary
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary, isethaphu ibhizinisi ku Hungary.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi eHungary
Ukwakhiwa Kwewebhu eHungary
Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano eHungary
Ukuthuthukiswa kwewebhu eHungary
Ukuthuthukiswa kweBlockchain eHungary
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza eHungary
Ukuthuthukiswa Kwesoftware eHungary
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eHungary
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni ngokusetshenziswa kwezixazululo ze-Investment eHungary futhi impumelelo yamakhasimende ethu ibaluleke kakhulu, ngoba iHungary, singabaholi, inkampani yethu yabameli yaseHungary inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika naseHungary, sinedumela lokuletha isipiliyoni sokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu eHungary nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu baseHungary nemindeni yabo. Ukuhlala kwethu ngethimba lokutshala imali eHungary kunikeza izixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala eHungary, lapho imvume yakho yokuhlala eHungary ivunyelwe.
Amandla wommeli weHungary ayadingeka kuzo zonke izinyathelo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali eHungary. Uma useHungary noma uhlela ukuvakashela eHungary, singawathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola iPower of Attorney. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani eHungary ukude, amandla akho abameli kufanele abe semthethweni ngokufanele ukuthi asetshenziswe endaweni yaseHungary. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele ukuthi liphikiswe noma livunyelwe ngokomthetho yihhovisi likazwelonke laseHungary.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eHungary
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshala imali eHungary?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala eHungary ngokutshala imali emnothweni waseHungary ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, ingcebo, amabhondi kahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali eHungary, ukuhlala ngohlelo lokutshala imali eHungary kusekelwa ukuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eHungary, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eHungary, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali eHungary kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali eHungary, abasebenza ngokuhlala kahle kakhulu ngabenzeli bezimali eHungary, kanye namafemu abonisana kakhulu nabokufika eHungary.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eHungary | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali eHungary | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment eHungary | Ukuhlala kabusha ngabameli bokutshala imali eHungary | Ukuhlala kabusha ngabacwaningi bokutshala imali eHungary
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eHungary?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali eHungary, kungachazwa njengokuthola ubuzwe baseHungary ngokutshala imali kwezomnotho waseHungary ngezindlela ezahlukahlukene ezifana, ibhizinisi, ingcebo, izibopho zikahulumeni, njll eHungary. Faka isicelo sobuzwe ngokutshala imali eHungary, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eHungary olwesekelwa yisakhamuzi ngezinsizakalo zokutshala imali eHungary, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eHungary, ubuzwe obuhle ngabameli bezokutshalwa kwezimali eHungary nobuzwe obuhle ngabeluleki bezotshalomali baseHungary, abasebenza ukuba yisakhamuzi esihle kakhulu ngabenzeli bezimali eHungary, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika eHungary.
Izinsizakalo ezifinyelelekayo zabatshalizimali zokuthuthela eHungary | Abaceli abafinyelelekayo bokufika eHungary | Abameli abangabizi bezimali zabokufika eHungary | Abameli abangabizi bezimali zabokufika eHungary | Ababonisi bezimali abangena mali abangabizi baseHungary | Amafemu omthetho wokufuduka angabizi weHungary
Iyini incazelo yepasipoti yesibili eHungary?
Iphasiphothi yesibili eHungary, ingachazwa njengokuthola ubuzwe obusemthethweni baseHungary ngokutshala imali kwezomnotho waseHungary ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, izindlu, izindlu, amabhizinisi kahulumeni, njll. Faka isicelo sephasiphothi yesibili eya eHungary, uhlelo lwesibili lwephasipoti laseHungary olwesekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili zeHungary, ngokusebenzisa abameli bethu besibili abaphuma phambili eHungary, abameli bamapasipoti wesibili abahamba phambili eHungary kanye nabeluleki abahamba phambili besibili baseHungary, abasebenza kuma-passport wesibili abahamba phambili eHungary, kanye namafemu abonisana nabokufika angcono kakhulu eHungary.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili zeHungary | Abameli bepasipoti besibili eHungary | Abameli bepasipoti besibili eHungary | Abameli bepasipoti besibili eHungary | Abaluleki besibili bepasipoti baseHungary
Iyini incazelo ye-visa yegolide eHungary?
I-visa yegolide eHungary, ingachazwa njengokuthola imvume yokuhlala eHungary ngokutshala imali kwezomnotho waseHungary ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengamabhondi kahulumeni, ibhizinisi, ingcebo, njll. Faka isicelo se-visa yegolide eHungary, uhlelo lwe-visa legolide laseHungary olwesekelwa Izinsizakalo ze-visa zegolide zeHungary, ngokusebenzisa abameli bethu abaphambili be-visa baseHungary, abameli be-visa begolide abahamba phambili eHungary kanye nabeluleki abahamba phambili be-visa baseHungary, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili eHungary, kanye namafemu abonisana nabokufika ahamba phambili eHungary.
Izinsizakalo ze-visa zegolide zeHungary | Abameli bama-visa egolide eHungary | Abameli begolden visa eHungary | Abameli bama-visa egolide eHungary | Ababonisi be-visa begolide baseHungary
Yiluphi utshalomali oluncane lwe-Residency ngokutshala imali eHungary?
Ukutshalwa kwemali okuncane kokuhlala ngokutshala eHungary kungama-EUR 200,000.
Ngabe unikeza ukusekelwa kwezomthetho kweHungary for Residency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu eHungary kanye nama-ejenti aseHungary ahlinzeka ngokusekelwa kwabahlali ngokutshala eHungary.
Ngabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary kuyabiza?
Izindleko zokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eHungary kanye nokuhlala kabusha ngezidingo zesikhwama sokutshala imali eHungary kungokwabantu ababiza kakhulu, sikhokhisa kuphela imali yokubonisana ngokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eHungary, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi zeResidency ngezixazululo Zotshalomali.
Iziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary noma nge-visa yabatshalizimali iye eHungary?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha izibonelo ezimbalwa ezokuhlala ngokutshala imali eHungary kusuka e-Asia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eHungary kusuka e-Afrika, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eHungary kusuka eYurophu, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eHungary kusuka eNingizimu Melika, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary kusuka eMalaysia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eHungary kusuka eBangladesh, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwemali eHungary kusuka e-Indonesia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eHungary kusuka eSri Lanka, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eHungary kusuka eNepal, ukuhlala kabusha ngokutshala imali eHungary kusuka eNdiya naseResidency ngokutshalwa kwemali eHungary kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali kwelaseHungary
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali eHungary
Amagama abalulekile ekuhlaleni ngokutshalwa kwezimali kweHungary
Inhlangano yabaqashi baseHungary kanye nabezimboni
Ilabhulali Yesizwe Szechenyi
Imibukiso eBudapestUkuxhumana ngojantshi baka-MAVHungary
I-Budapest Chamber Yezokuhweba Nezimboni
IHhovisi LaseHungary CentralStatistical Office
Ikhasi eliyisiqalo seHungary Isiko
EU - eHungary
I-Központi Statisztikai Hivatal
Ohambweni Lwezokuxhumana BaseHungary Kwelinye Izwe
IHungary Chamber of Commerce kanye neZimboni
Umnyango Wezangaphandle Nezokuhweba
Inxusa laseHungary e-US
Izabelo Zezizwe Kwamanye Amazwe eHungary
Ikhasi Lasekhaya LaseHungary
Xhumanisa UMnyango Wezokufuduka WaseHungary , onesibopho sokwakha izinqubomgomo zokusheshisa Ukuthuthela Kwelinye Izwe eHungary